Guddiga Agaasimayaasha - Xarunta Kheyraadka Gabowga & Naafada (ADRC)
Da'da iyo Xarunta Kheyraadka Naafada Xarunta ADRC Agaasimeyaasha
Xubnaha Gudiga ADRC
Raadinta shaqsiyaad nala wadaaga hamigeenna!
Waxaan haynaa shaqooyin ka banaan golahayaga. Haddii adiga ama qof kale oo aad taqaanid aad xiiseyneysaan ka shaqeynta Golaha Maamulka ee ADRCs, fadlan buuxi foomka su'aalaha ah ee ku yaal xagga hoose ee boggan.
Shirka soo socda
Ma jiro shir guddi oo dhacaya Juun 2022.
Iyadoo la raacayo Qeybta 19.85 iyo 59.094, Wis. Stats., Ogeysiis waxaa la siinayaa Dadweynaha in kulan gaar ah oo Fududeeye ee Guddiga Agaasimayaasha ADRC la qaban doono taariikhda kor ku xusan.
Dadweynuhu waxay heli karaan kulammadan gaarka ah iyagoo waca
Kulan #: 2437 540 8401
Riix # #
Dadweynuhu waxay ka heli karaan kulamadan khaaska ah ee khadka tooska ah:
Ma jiro shir guddi loo qabtay waqtigan.
Dadka oo dhami waa qiimeeyaan, dabaaldegaan, waxayna ku xiran yihiin nolosha fursadaha.
Xubnaha guddigayagu waxay leeyihiin khibrad shaqo / iskaa wax u qabso, iyo tan ugu muhiimsan, dareen ah inay metelaan macaamiisheenna.
ADRC waxay u adeegtaa dad aad u tiro badan Gudiguna waa codka dadka aan u adeegno.
Waa dadka aan u adeegno.
Xubnaha guddiga ADRC waxay door muhiim ah ka ciyaaraan hagida howlaha iyo dadaallada hay'adda waxayna leeyihiin mas'uuliyado badan, oo ay ka mid yihiin:
Caawinta qorsheynta, kormeerka, iyo adeegyada horumarinta
Sharaxa Shaqada ADRC
Guddiyada Maamulka ee Waayeelka iyo Naafada
Xubnaha cusub ee 'ADRC Board' waxaa soo jeediya oo ansixiya guddiga hadda jira ee 'ADRC Board'.
Kadib Degmada Brown wuxuu u magacaabaa ansixinta ugu dambeysa ee Golaha Degmada Brown.
Waxaan rabnaa inaan dhex galno xirfadaha “Sawirka Weyn” ee kuwa wax fakaraya.
Xubnaha guddiga ADRC;
Waa kuwo fikir leh, maskax furan, iyo firfircoon.
Yeelo xirfado xiriiro dadweyne oo xoogan oo diyaar u ah inay horumariyaan ADRC iyo dadaallada ay wadaan.
Leh himilo adeeg iyo u doodid macaamiisha ADRC.
Waxay ka xor yihiin khilaafaadka danaha; iyagu ma aha bixiyeyaal adeegyo ka heli doona gudbinta ADRC.
Rumayso oo dhiirrigeliso Himilada iyo Himilada ADRC.
Waqtiga Balan Qaadka
Guddigu wuxuu kulmaa toban jeer sanadkii khamiista afaraad ee bisha. Kulamada Juun / Luuliyo iyo Noofambar / Diseembar waa la isku daray oo waxay ku kulmi karaan maalin aan ka ahayn Khamiista
Kulamada ayaa bilaabanaya 8:30 aroornimo waxayna socdaan illaa 10:30 subaxnimo.
Shuruudaha guddiga waa saddex sano waana la cusbooneysiin karaa mar. Hal sano ka dib xubnaha guddiga ku meel gaarka ah dib ayaa loo magacaabi karaa.
Xubnaha guddiga waxay awood u yeelan karaan inay ka qeybgalaan shirarka caadiga ah oo ay diyaar u ahaadaan shirarka xoogagga xilliyeed, munaasabadaha gaarka ah, iyo dhageysiga dadweynaha.
Xiisaha Xiisaha Leh?
ADRC waxay had iyo jeer raadineysaa dadka xiisaynaya ee doonaya inay ka adeegaan golaheena 14-ka xubnood ah. Furitaanku way kala duwan yihiin sanadka oo dhan waana ku faraxsanahay inaan helno liis ay ku qoran yihiin dad diyaar u ah inay adeegaan.
Ma u malaynaysaa inay tahay wax aad xiisaynayso?
Waan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno.
Fadlan buuxi foomkan xiisaha Guddiga iyo Agaasimaha ADRC, Devon Christianson, ayaa la soo xiriiri doona si uu ugala hadlo xiisahaaga ugana jawaabo wixii su'aalo ah.
Foomka Dulsaarka Guddida ADRC
FIIRO GAAR AH: Foomkan kuma habboona Internet Explorer (IE). Fadlan isticmaal biraawsar kale, sida Mozilla, Chrome, ama Edge.
Taariikhda(Loo baahan yahay)
Magaca hore(Loo baahan yahay)
Magaca ugu dambeeya(Loo baahan yahay)
State(Loo baahan yahay)
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingCiidamada Qalabka SidaCiidamada Qalabka Sida ee YurubCiidamada Qalabka Sida
Waa ayo cidda aad u shaqayso hadda?(Loo baahan yahay)
Xagee ka fariisatay(Loo baahan yahay)
Waxaan ka maqlay fursadan ka timid:(Loo baahan yahay)
Waxaan xiiseynayaa inaan ku biiro sababtoo ah:(Loo baahan yahay)
Awoodaha ugu weyn ee aan ku biiri karo waa:(Loo baahan yahay)